विण्डोज टेनमा अटो अपडेटलाई यसरी गर्नुहोस् डिसेबल - Tech News Nepal Tech News Nepal
सोमबार, मंसिर ८, २०७७ २०:४४
काठमाडौं । विण्डोज टेन अपरेटिङ सिस्टमले कम्प्युटरमा स्वतः नयाँ अपडेट डाउनलोड तथा इन्स्टल भइरहेकाे छ । यसमा भएको अटो अपडेट फिचरले डिभाइसलाई हरेक नयाँ सेक्युरिटी प्याचसँग अपडेट गराएर पर्फमेन्सलाई थप राम्रो बनाउने काम गर्दछ ।
तर कहिलेकाहिँ अपडेटहरु आफैं पनि बगसँग आउने हुँदा यसले असर पुर्‍याउँछ । यदि विण्डोज टेन अपरेटिङ सिस्टममा यस किसिमको समस्या तपाईंले पनि भोग्नुभएको छ भने आफ्नो कम्प्युटरको अटो अपडेटलाई डिजेबल गरिदिनुहोस् । आज हामी तपाईंलाई रजिस्ट्री इडिटरको प्रयोग गरी यसलाई डिजेबल गर्ने तरिका सिकाउने छौं ।
रजिस्ट्री इडिटर प्रयोग गरी यसरी डिसेबल गर्नुहोस् अटो अपडेट
१. रजिस्ट्री इडिटर आफ्नो कम्प्युटरमा खोल्नुहोस् । यसका लागि स्टार्ट मेनुमा गएर ‘Regedit’ शब्द सर्च गर्नुहोस् । अब रजिस्ट्री इडिटरमा क्लिक गरी त्यो एप्लिकेसन खोल्नुहोस् ।
२. रजिस्ट्री इडिटरमा तल उल्लेखित कुरालाई नेभिगेट गर्नुहोस् ।
३. अब नयाँ बनाएको कीलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र न्यु सबमेनु चयन गरी ‘की’ अप्सन चयन गर्नुहोस् ।
४. नयाँ बनाएको कीलाई ‘AU’नाम दिनुहोस् । अब एयु कीमा राइट क्लिक गरी > DWORD (32-bit) Value सेलेक्ट गर्नुहोस् ।
५. यो नयाँ कीलाई ‘NoAutoUpdate’ नाम दिनुहोस् । त्यसपछि NoAutoUpdate कीमा डबल क्लिक गरी त्यसको भ्यालु वानमा परिवर्तन गर्नुहोस् । अब OK बटन क्लिक गर्नुहोस् ।
यस किसिमको परिवर्तन गरिसकेपछि कम्प्युटरलाई तपाईंले रिस्टार्ट गर्दा अझ राम्रो हुन्छ । यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि अब तपाईंको कम्प्युटरले अटो अपडेट कहिल्यै पनि इन्स्टल गर्दैन ।
नयाँ अपडेट कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न तपाईंले विण्डोज अपडेट सेटिङमा गएर Check for Updates बटनमा क्लिक गरी अपडेट उपलब्ध छ भने त्यसलाई डाउनलोड तथा इन्स्टल गर्नुपर्दछ ।